hahazoana miaraka amin'ny crypto na dia mihena aza ny tsena!
Amin'ny maha-mpanjifa StormGain anao, afaka mandray anjara amin'ny fandaharan'asa tsy mivadika mitambatra ianao:
– Hatramin'ny 20% bonus amin'ny deposit rehetra
– Hatramin'ny 10% mahaliana anao amin'ireo cryptos rehetra notehirizinao tao amin'ny valizy StormGain
– Hatramin'ny 20% fihenam-bidy amin'ny vaomiera sy fifanakalozana
Mba hahafantarana bebe kokoa, tsidiho fotsiny ny pejin'ny fandaharana tsy mivadika.
Platform crypto rehetra-amin'ny-iray StormGain.com dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra amin'ny 2020
StormGain dia sehatra iray natao hanatsorana ny varotra na fifanakalozana fifanakalozana ny cryptocurrency ary hahatonga azy ireo ho azo fidina sy mora takarina ho an'ny rehetra. Amin'ity vanim-potoana fohy ity, nahomby ny sehatry ny fampidirana fitaovana mahasoa ho an'ny mpivarotra, miasa amin'ny fividianana sy fandoavam-bola cryptos ho fanampin'ny interface tsara ho an'ny mpampiasa azy. Izany dia mahatonga an'i StormGain ho sehatra iray tena mahazo aina ho an'ny vao manomboka sy ho an'ny matihanina.
StormGain dia nekena ihany koa ho sehatra crypto an'ny 2020 ny “Ny eoropeana”, gazety an-gazety manaja. Antsoin'ny magazine ilay StormGain iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo maniry hiditra ao amin'ny tontolon'ny vola madinika crypto, ary tonga lafatra ny dikany. StormGain amin'izao fotoana izao 120,000 mpanjifa mihoatra ny 100 misy firenena sy ny mpampiasa interface tsara misy 23 fiteny mba ahafahan'ny mpampiasa rehetra manerana an'izao tontolo izao miditra tsy misy fepetra ny sehatra ary miasa amin'ny fitenin'izy ireo manokana ao anatin'ny fampiharana.
voalohany, avelao hazavao ny sasany amin'ny endri-javatra StormGain. Satria sehatra io miaraka amin'ny fanoratana haingana, dia ho vonona handeha ianao afaka minitra vitsy aorian'ny dingan'ny fanamarinana super-fohy. Ny hany ilainao dia ny adiresinao, ny nomeraon-telefaona sy ny tenimiafinao.
Fitsapana varotra tsy misy atahorana miaraka amin'ny USD 50,000 kaonty demo, izay ahafahanao mizaha ireo fitaovana sy endri-javatra atolotry ny sehatra alohan'ny fifanakalozana amin'ny kaontinao mivantana, na manao tahiry ary manomboka mampiasa ny kaontinao mivantana avy hatrany.
Ny fividianana vola vola eto amin'ity sehatra ity ihany koa, satria azonao atao izany amin'ny karatry ny bankinao (debit na carte de crédit). Izany dia manome anao miditra amin'ny vola bitika manan-danja indrindra amin'ny tsena. Anisan'izany Bitcoin (BTC), Ethereum (Ita), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) sy ny maro hafa izay mahazo varotra na hihazona. StormGain koa dia nanambara ny fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny Koinal any London any Koinal, amin'ny ezaka hanolotra ireo mpampiasa azy bebe kokoa safidy sy mora ny fampiasana. Ity orinasa ity koa dia manohana ny safidy hividy vola madinika crypto. Koinal dia ahafahan'ny fividianana ny fivarotana vola toy ny Bitcoin, Ethereum, Litecoin sy Ripple.
Na dia mora be aza ny mividy crypto, StormGain dia efa nanatanteraka ny safidy hisintonana ny crypto ho vola sandoka amin'ny alàlan'ny famindrana banky mba hahafahanao manana ny fandresenao hoesorina avy hatrany.. Tombontsoa hafa atolotry ity sehatra ity ny mpampiasa ary azontsika atao ny manasongadina ny fandalovana, i.e. ny fidirana amin'ny fitaovana rehetra eo am-panolorana dia misy manodidina ny famantaranandro, ary tsy misy vaomiera miafina na 0% adino isan'ora. StormGain dia manolotra iray amin'ireo fitaovana manan-danja indrindra ho an'ny mpivarotra rehetra: famantarana ara-barotra maimaimpoana. Ireo dia fampahafantarana isan'andro isan'andro izay mampahafantatra anao ny fihetsiky ny tsena farany ary mampahafantatra hatrany ireo mpivarotra vao afaka mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra izy ireo rehefa manohy.
Ao anatin'ny ezaka hanomezana tombontsoa sy fanampiana lehibe indrindra, ny sehatra dia manome lesona video maimaim-poana amin'ny fampiofanana crypto ho an'ny rehetra, manome fahatakarana bebe kokoa ny fomba fiasan'ny tontolon'ny crypto sy ny fahatakarana bebe kokoa ny zavatra amelan'ny mpampiasa azy ho lasa matihanina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy..
StormGain dia manolotra ny fahafaha-manao varotra ihany koa miaraka amin'ny multiplier hatramin'ny 200x, ka afaka mivarotra amina haavony bebe kokoa noho ianao raha tsy izany, izay ahafahanao mampitombo ny tombotsoanao. Ireo fihenam-bidy fampihenana sy fividianana tombony dia atolotra ihany koa hanampy anao amin'ny asa rehetra ary hampihenana ny sisin'ny fahadisoana amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, izay tena manan-danja indrindra rehefa manao fifanakalozana crypto.
Ny fiarovana dia antony iray lehibe hafa ho an'ny StormGain, satria ankoatry ny 6 takelaka crypto, izay ahafahanao mitahiry ny cryptocurrencies mahazatra indrindra, manana poketra mangatsiaka koa ianao hitehirizana ny volanao. Ny StormGain dia manome ireo mpampiasa avo foana amin'ny fenitra avo indrindra sy ny fiarovana, mba hahafahanao mihazona ny haram-bolanao amin'ny rindrambaiko 2-factor sy ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fiarovana ny sehatra, noho izany dia vonona foana ianao.
Ireo fitaovana rehetra ireo dia tena manampy amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny tsena. Ny korontana ara-toekarena sy firongatry ny tsena dia mahatonga ny varotra crypto ahafahana mampivarotra ny mpivarotra amin'ny toe-javatra iainana. Zava-dehibe ny fanomezan-danja amin'ny lafiny hafa, toy ny saram-barotra sy tombontsoa azonao avy amin'ireo programa isan-karazany atolotry ity sehatra ity.
Fanohanana ny mpanjifa; StormGain dia manolotra zavatra somary vitsy kely amin'ny sehatra crypto, misy 24/7 fanohanana mivantana amin'ny alàlan'ny «live chat», mailaka, telegrama sy telefaona. Izany dia ahafahana mifandray mivantana amin'ireo manam-pahaizana momba ny sehatra, izay manampy amin'ny famahana olana ary manjary mahay miabo amin'ny varotra. Ity dia singa iray tena manan-danja rehefa misafidy sehatra crypto, satria tsy ny sehatra rehetra no manana an'io serivisy io, izay tena mahasoa ho an'ny mpivarotra.
Miaraka amin'i StormGain dia tsy isalasalana ny hahafahanao mifanakalo na mitazona cryptos amin'ny fomba tsotra sy tsotra. Tsy isalasalana fa hisy fiasa sy fitaovana fanampiny amin'ny ho avy izay hanampy ireo mpivarotra hahatratra ny tanjony. Azonao atao ny miditra ao amin'ny lampihazo cross-fitaovana amin'ny fotoana rehetra ary na aiza na aiza misy ny findainao, tablette na PC. Azonao atao ny mahita Google Play ary ny Fivarotana Apple na amin'ny fandehanana ao amin'ny www.stormgain.com ary fenoy ny taratasy fisoratana anarana hahazoana fidirana amin'ny sehatra web.